Ragaalee: PPn ABO dadhabsiisuuf deeggarsa guddaa murnoota jilbeeffattootaaf kennaa jirti; ragaaleen keenya kunoo ti! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsRagaalee: PPn ABO dadhabsiisuuf deeggarsa guddaa murnoota jilbeeffattootaaf kennaa jirti; ragaaleen keenya kunoo ti!
1. Hogganoota ABO ejjannoo jabaa qaban dursanii hidhuu (Jaal Abdii Raggaasaa, Jaal Mikaa’el Booran)
2. HD ABO akka manatti ugguraman dursamee godhamuu
3. Bilbilli HD ABO akka jalaa cufamu taasifamuu
4. Hogganoota ABO mirga wabii argatan humna tikaa waliin ta’uun akka hin baaneef oliyyannoo irratti gaafachuu
5. ABOn otuu dhiibbaa mootummaan irratti gocha ajiru ofirara qolachaa jiruu, humna mootumaman deegagramanii ibsaa fi labsa hundee hin qabne baasuu
6. Miidiyaan mootummaa ibsa seeraan alaa san guutummaatti dabarsuu fi daran hafarsuu
7. Dinagdeen guddaan karaa namoota dhuunfaa murnoota PPf jalbeefaftaniif kennamuu dha.
Gochaan badaa kun garuu ummata Oromos ta’ee, qabsoo Oromoo daran ni jabeessa.
ABOn yoomillee ni injifata!
“Shaneen Gumii Hayyu Duree hojiirraa kaasuuf aangoo hin qabu”
Ibsa guyyaa kaleessaa gartuun ABO diiguuf mootummaarraa dirqama fudhatee deemu ‘Hayyu Duree ABO uggurreerra’ jedhanii kennan ilaalchisuun BBC News Afaan Oromoo waliin gaaffiifi deebii kan taasisan Jaal Firaa’ol Jaallataa/Mohaammad Raggaasaa “Shaneen Gumii Hayyu Duree ABO hojiirraa kaasuuf aangoo hin qabu” jedhan.
Bakka bu’ummaadhaan dubbi himaa ABO ta’anii hojjechaa kan jiran Jaal Mohaammad Raggaasaa “ibsi kenname kan ABO bakka bu’u miti, namoonni ibsa kennan kunniin hojii dhaabaarraa dhorkamanii maqaa ABOtiin ibsa isaan kennan ABO bakka hin bu’u” jedhan.
“Uummanni Oromoo kan beekuu qabu, Addi Bilisummaa Oromoo kaayyoo haqaafi gaachana qabsoo Oromooti malee nam-tokkee ykn garee muraasa miti; kanaafis sabni keenya kaayyoo ABO qabatee akka deemu dhaammanna” jedhan.
Ibsa Ejjennoo Qeerroo fi Qarree bilisummaa Oromoo Amboo irraa !!
Toftaan dulloomaa plaan B opdo pp sirni nafxanyaa ammas qabsoo qeerroon ni fashala’aa.Opdon bakka hundatti jibbamtee waan qabatu dhabde jirtu ijibaata dhumaa ABO fi KFO diiguuf yaalaa jirti.
ABO’N shira ganticha Abiy fi opdo pp’n hin diigamu. Kaayyoon ABO dhiiga keenya keessa jira malee gantoota galma waadaa haarsaa lubbuu,Lafee fi dhiiga qabsaa’oota oromoo kumootaa itti wareegamee as gahe warra qarshiitti gurguratan Garee Araarsoo Biqilaa harka hin jiru. Hooggansa ABO haqaan hojjetan hiisisaa. Qeerroo fi deeggartoota ABO hidhaatti guursisaa. Gantootaa fi Hattoota maqaaf ABO keessa jiran qarshiin bitanii uummata oromoo opdo pp sirna nafxanyaa jalatti galchuun abdan galma hin gahu..Awwuu danda’uu malee ammuma opdo pp,ABO tokkoome fi PBO ti.UUMMATA OROMOO DAMMAQEE DIINAA FI FIRA adda baafatee biyya keessaa fi alaa tokkummaan bilisummaa fi walbummaaf Falmaa jiru jalaa sobaa fi shiraan goyyoomsuun duubatti deebisuun hin danda’amu.
kayyoon Waadaa jaallan qabsoo bilisummaa oromoof jecha wareegaman gantootaa fi shiftoota opdo pp waliin shira xaxxuun karaatti hin hafu. Qeerroo fi qarree oromiyaa miliyoonotaan itti fufa.Bilisummaa fi walabummaan oromoo qabsoo keenyaan galmaan ni geenya Gareen shira kayyoo Opdo pp Abiy xaxaa jiruun ABO diiguuf gullaleetti naqamee jirus qabsoo qeerroon haaxaa’amee achi keessaa akka bahu abdii qabna.
Gareen gantootaa kunis oromiyaa keessatti akka hin sochoone qeerroon dura goree barbadeessuu qaba.
ABOn dhaaba keenya.(Jaal Daawud Ibsaan durfama).
KFOn Dhaaba keenya.(Prof Maraaraan durfama).
ABO + KFO + WBO + qeerroo/qarree/ = Bilisummaa fi Walabummaa qofa.
kan biraa hin beeknu.
Raffisaa Taammanaa Guutuu
“Osoo Handaaqqoon si’a lama hin iyyiin yeroo sadii na ganta” jedhe Iyyesuus Peexiroosiin!
Yehuudaan inni Yesuusitti baayyee dhiyaatu sunis Qarshii 30n dabarsee yesuusiin kenne! Boodarra Yihuudaan Gaabbiin of ajjeese!
Waliif irree taana. Warra oromummaan maal akka ta’e galeef WBOtti makama!!